Somaliland: Laba Wasaaradod Oo Khilaaf Adagi Soo Kala Dhex Galay Balse Maxay Isku Hayan? - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Laba Wasaaradod Oo Khilaaf Adagi Soo Kala Dhex Galay Balse Maxay...
Laba ka mid ah Wasaaraddaha Somaliland ee u igman hawlaha shaqo ee loo xil saarey ayaa waxa masuuliyiinta wasaaradahaasi la sheegay inuu ka dhex qarxay khilaaf aad u balaadhan kaasi oo salka ku haya shaqooyinka iyo adeegyada ay bulshada u hayaan.
Khilaafkan ayaa u dhaxeeya Wasaaradda Beeraha iyo Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga oo ay wasiiro ka kala yihiin Wasaaradda Deegaanka oo ay wasiir ka tahay Marwo Shugri Xaaji Ismaaciil Baandare iyo Wasaaradda Beeraha oo uu Wasiirka ka yahay Mudane Maxamed Aw Daahir Ibraahim.
Khilaafkan ayaa ka bilaabmey sida ay sheegeen ilo wareedyo u dhuun daloolaa kharashka mashruuc aad balaadhan oo ay ku baxayso 8 Milyan oo Doolar isla markaana uu bixinayo dalka Jarmalku laguna magacaabo masharuucan (GIZ) kaasi oo loogu talo galay Wasaaradda beeraha balse ay Wasiirka Deegaanka Somaliland ku doodayso in uu Wasaaraddeeda mashruucu khuseeyo.
Labadan wasaaraddood ee khilaafku ka dhex qarxay ayaa waxa la sheegay in wasaaradda Deegaanka la siiyey qadar lacaga oo dhan 2 Milyan balse ay masuuliyiinta wasaaraddu ku doodayaan in mashruucani uu wasaaradooda khuseeyo isla markaana ay shaqadooda tahay.
Khilaafka labadan Wasaaraddood ayaa dacwadoodu gaadhey sida la sheegay Madaxtooyada Somaliland oo hore uga garnaqdey balse wali xal looma helin, waxaanu khilaafku sii xoogaystey ka dib markii Wasiirka Beeraha Somaliland uu Boodhka Wasaaraddiisa oo ah Wasaaradda Beeraha Somaliland uu ku soo qortey WASAARADDA BEERAHA IYO KHAYRAADKA DABIICIGA AH EE SOMALILAND,taasi oo si wayn uga cadhaysiisey masuuliyiinta Deegaanka.
Muranka ka dhex aloosan labadan masuul ee ilaa iyo hadda aan wax maaro ah loo hayn ayaa labada dhinac midkoodna aanu ka hadal arintani,lana garanayn talaabada ay Madaxtooyada Somaliland ku kala furdaamin doonto Labada Wasaaraddood ee Hondaha iskula jira.